Nitondra fanazavana nanoloana ny resabe manodidina ny fanomezana « Panier garni » ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina, nandritra ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha androany alatsinainy 20 janoary 2020. Nambarany fa nandritra ny Filankevitry ny minisitra farany talohan’ny faran’ny taona 2019 no nandraisana fanapahan-kevitra ny hanomezana « Panier garni » ireo mpiasa birao amin’ny ministera foibe, rehefa nofoanana ny tetibola fanaovana fety faran’ny taona sy fifampiarahabana noho ny taona vaovao eny anivon’ny ministera. 1,5 miliara Ariary ny tetibola natokana ho amin’izany ary « Panier garni » fa tsy vola no zaraina, hoy ny filoha fa fanararaotana na tsy fahaizana ny asany no nataon’ny minisitra sasany nandefa lisitra mpiasa ahian’ny ministera manerana ny Nosy. Nahitsy ny filoha Andry Rajoelina nilaza fa « tsy nisy teny hizara vola, fa solom-pen’akoho ». « Fampakarana karama 13% no fanomezana lehibe ho an’ny mpiasam-panjakana », hoy izy nanamafy.
Ho feno herintaona amin’ny 24 janoary ny nananganana ny governemanta izay mifamatotra amin’ny « contrat-programme ». Nampitahain’ny filoha Andry Rajoelina amin’ny ekipa baolina kitra ny zava-misy, misy ny nahomby, tao ny reraka ambony ihany, tao ny tsy afaka raha nihaona tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha izy androany. Nohamafisiny fa hisy ny fanovana ny Governemanta ary anatiny tanteraka amin’ny fanaovana tombana sy fijerena ny asan’ireo minisitra izy amin’izao fotoana izao.
Mikatso ny fizarana vola fisotroan-drononon’ireo be antitra mandray izany amin’ny Cnaps eto Mahajanga vokatry ny fahatapahan’ny herinaratra tamin’ity maraina ity. Tsy manan-tsafidy ireo zokiolona fa dia miaritra, na dia efa nisy namonjy filaharana vao maraina aza. (Jereo Sary Tohiny)
Andro tsy fiasana natokana hahatsiarovana an’i Martin Luther King Jr. anio ka mikatona ny Masoivoho Amerikana, araka ny fampahafantarana nataony. Tamin’ny taona 1983 ny Filoha Amerikana Ronald Reagan no nanasonia ny didim-panjakana izay nametraka ho andro manokana, tsy hiasana nefa handraisan-karama, ho fahatsiarovana ny Dr King ho an'ny Amerikanina. Izy no Amerikana mainty hoditra voalohany teo amin’ny tantara nanokanana androm-pirenena toa izao. Andro izay nankalazaina voalohany indrindra tamin’ny taona 1986, isaky ny Alatsinainy fahatelo amin’ny volana Janoary, izay daty manakaiky ny 15 Janoary fitsingerenan’ny taona nahaterahan’ity mpitolona ho an’ny zon’olompirenena ity. (Jereo Sary Tohiny)
Nindaosin’ny fahafatesana androany, teo amin’ny faha-70 taonany i Franck Raharison. Mpanao gazety zokiolona, isan’ny mpiara-nanangana ny La Gazette de la Grande Ile izy, efa tao amin’ny Madagascar-Tribune sy Madagascar-Matin ihany koa. Nandeha nisotro ronono izy tamin’ny taon-dasa.
Nanomboka ny androany sabotsy 18 janoary 2020 ka hifarana ny alahady 19 janoary 2020 ny fanadinana fandraisana ho mpianatra Polisy manerana ny Nosy. Mpiadina miisa 14 700 no mifaninana ka ny 20 amin’izy ireo dia ho raisina ho mpianatra « Commissaires de Police », ny 30 « Officiers de Police », 100 « Inspecteurs de Police » ary 1000 « Agents de police ». Mitsinjara ao anatin’ny foibem-panadinana miisa 14 izy ireo. Raha ny eto Antananarivo manokana dia nizotra am-pilaminana ny fanadinana. (Loharanom-baovao: Polisim-pirenena) (Jereo Sary Tohiny)